Iprofayile yenkampani-Jinan Tianda Textile Technology Co., Ltd.
I-Jinan Tianda Textile Technology Co, Ltd.
Siphembelela ukukhuthazwa kwekhaya, ukudibanisa umsebenzi wobugcisa wamagcisa kunye noyilo ebantwini
kunye neendawo kwihlabathi liphela.
Ngamavenkile angaphezu kwe-100 kunye namaqabane e-franchise kumazwe ali-9, siyindawo yamazwe aphesheya yefanitshala yala maxesha neyangoku, izindlu zendlu kunye nokuhonjiswa okunceda abantu bamkele uBomi obuBalulekileyo.
Iindlela zethu zokuphila zibonelela ngokuphila okuphefumlelweyo kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu, uyilo olukhethekileyo, kunye nesitayile esingapheliyo- zonke zinikwe uyilo lwedijithali kunye nezixhobo zokubonelela ezibonelela ngezisombululo ezingenamthungo ezivenkileni nakwi-intanethi.
Ngobugcisa obahlukileyo bokuyila, indawo yokugcina izinto kunye noluntu oluku-intanethi, siyazibandakanya nabathengi bethu kwimidiya yoluntu, ukuthengisa ngeselula, iinkonzo zoyilo, irejista yezipho, nokunye okuninzi.
Indlela ebhetele yokuthenga i-intanethi ngefanitshala, imihombiso yasekhaya nokunye okuninzi!
Sichola izandla kwaye sikhetha ezona zisemgangathweni kunye nesitayile sakho kunye nekhaya lakho.
Kutheni uchitha iintsuku uqhuba ukusuka kwivenkile ukuyokugcina uzama ukufumana inkangeleko efanelekileyo okanye isiqwenga esikhethekileyo. Fumana yonke into oyifunayo kunye nokunye kwinduduzo yekhaya lakho.
AWUKHO wedwa. Ukusuka kukhangelo, ukuyalela, ukuhanjiswa ... silapha ukukunceda kwinqanaba ngalinye lendlela. Iqela lethu loKhathalelo loMthengi linokuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo, kunye nokubonelela ngoncedo olwenzelwe wena: ucwangciso, ukubakho, ii-odolo ezinkulu, iiodolo zesiko kunye neenketho zokuhambisa.
Kwaye siyinkampani yekratshi yaseTshayina! Onke amaxabiso akwimali ye-CAD kwaye awuyi kubona nayiphi na into eyothusayo okanye imali yokutshintsha xa uphuma.
Thenga ukhetho lwethu olubanzi lwefanitshala esemgangathweni kunye nokuhonjiswa kwasekhaya kwigumbi ngalinye, kunye nohlobo olukhulu loomatrasi, izixhobo zombane kunye nezinto ze-elektroniki ngamaxabiso angenakubethwa! Fumana yonke into oyifunayo ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho.
Thenga ngokuzithemba! IsiQinisekiso sethu soKoneliseka kunye neThembiso leMidlalo eliThengisayo liqinisekisa ukuba uhlala wonwabile ngokuthenga kwakho.